Michael Keating oo kulan xasaasi ah la qaatay guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Michael Keating oo kulan xasaasi ah la qaatay guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka
Ergayga gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Michael Keating ayaa xalay kulan xasaasi ah magaalada Muqdisho kula yeeshay guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dalka.
Kulankaasi oo ahaa mid albaabada u xiran ayaa wararka qaar waxay sheegayaan in labada dhinac ay kaga hadleen arrimo quseeya doorashooyinka Soomaaliya, gaar ahaan 11-ka kursi uu guddigu dhawaan ku baabi’iyay natiijadii doorashada ee kuraastaasi lagu soo doortay.
Michael Keating ayaa guddiga xalinta khilaafaadka u sheegay in cabashooyinka laga soo gudbiyay doorashada looga baahan yahay inay xaliyaan, isagoona sidoo kale kula dar-daarmay inaysan doorashada sabab u noqon dib u dhac ku yimaada.
Guddiyada doorashooyinka maamul goboleedyada dalka ayaa dhawaan si cad ugu soo horjeestay go’aankii uu guddiga xalinta khilaafaadka ku laalay 11-kursi ee lasoo doortay.
Dhinaca kale, waxaa dhawaan la filayaa in kulan xasaasi ah ay wada yeeshaan guddiga xalinta khilaafaadka doorashada iyo madaxda madasha qaran, kuwaas oo ka wada hadli doonno muranka ka taagan 11-ka kursi uu dhawaan guddigaasi laalay.
Ilaa iyo haatan lama oga waxa kasoo baxay kulanka dhexmaray ergayga gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Michael Keating iyo sidoo kale guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dalka.
Si kastaba, kulankaan ayaa kusoo beegmaya xilli buuq iyo isqab-qabsi uu ka dhex jiro 11 kuraas oo la sheegay in lagu soo doortay qaab aan sharci ahayn.